Des Moines, IA • Fanorana amin'ny vatan'ny nofo sy NuRu
Aza mankaleo sy reraky ny Des Moines, IA. Fandriho ny otra nuru anao ara-nofo.
Des Moines no renivohitra sy tanàna be mponina indrindra ao amin'ny fanjakan'i Iowa Etazonia. Izy koa no sezan'ny distrikan'i Polk County. Ny ampahany kely amin'ny tanàna dia mipaka hatrany amin'ny County Warren. Nampidirina tamin'ny 22 septambra 1851, ho Fort Des Moines, izay nohafohezina ho "Des Moines" tamin'ny 1857. Aza mankaleo sy reraky ny Des Moines, IA. Mamandrika ny fanorana nuru ara-nofo.